DAAWO: AFKA ISKUMA QABTAAN GABDHAHA MARKA SIDAN LOOGU RAAXEEYO. | Arrimaha Bulshada
Home Bulshada DAAWO: AFKA ISKUMA QABTAAN GABDHAHA MARKA SIDAN LOOGU RAAXEEYO.
DAAWO: AFKA ISKUMA QABTAAN GABDHAHA MARKA SIDAN LOOGU RAAXEEYO.
Thursday, December 07, 2017 Bulshada Edit
Bulsha:- Sida caadada ah ee aad nooga barateen barnaamijka buslhada waxan diin heynaaa cashir cususb oo ku saaabsan bulshada.
Ceeb ma ahan in hab waliba oo macaantaada ku heli karto gariirka galmada u sameeyso , hadaba galmada lagu sameeyo istaaga ayaa haween badan la dhareeraan oo wax ay helaan macaan kii ugu dambeeyay.
Habkaan ayaa ah in ninka uu istaago halka haweeneyda iyana ay gacameeda ku qabsaneyso qoorta ninka , waxa uu ninka sameeynayaa in uu kor qaado lamaantiisa si lugaheeda ugu qabsato dhexdiisa (Kiliyaha).
Cilimi baaris lagu sameeyay xiliga ay dumarka ugu jecelyihiin raaxada ayaa lagu sheegay in dumarka ay raaxada ugu Jeceylyihiin marka ay gaaraan da’da 30 sano, inkastoo uu muran ka jiro oo Qubarada qaar ee ku taqasusay cilmiga Jinsig ay qabaan in dumarka ay ugu jeceylyihiin Raxaada iyo galmada xiliga ay dhalmo gooyaan,waxaana lagu qiyaasaa da’da u dhaxeyso 40—45 Sano.
RIIX HALKAN SI AAD U DAAWATO
Daraasda ayaa lagu sheegay in dumarka dareenkeeda hoose aad u kordho xiliyadaasi, waxay noqodaan kuwaaan xitaa aan ka xishoonin galmada waxayna la soo baxaysaa qibrado badan iyo farsamooyin aan caadi eheen. Sidoo kale waxaa daraasdaan lagu sheegy in dumarka marka ay joogaan xiliyadaasi aysan ka helin galmada degdeg ah, waxay jecel yihiin in loo raaxeeyo ku dhwaad 25 daqiiqo markaasi kaddib waxay u baahanyihiin galmo culus .
Dhinaca kale daraasadeen ayaa sameyn weyn ku yaalatay dumarka Soomaalida ah oo inta badan loo guday qaabka lagu magcaabo Fircooniga,iyadoo laga jaray xubinta kintirka oo lagu sheegay in raaxo waali ah laga helo. Dumarka loo gudo qaabka firconiga ah ayaa la sheegay in macaansiga raaxada iyo galmada ay u bilaabato marka ay gaaran 30 ka sano ama ay dhalmo gooyaa,waxayna dareemaan rabitaanka galmada waayo da’dan marka ay gaaraan farjiga murqihiisa ayay ka dareemaan galmada.